China JHPRO JH-IE48-F kwezolimo umatshini wokumba umthi ukutyala umhlaba auger ipetroli umhlaba drill mveliso kunye nabenzi | Jiahao
JHPRO JH-IE48-F kwezolimo umatshini wokumba umthi ukutyala umhlaba auger ipetroli umhlaba wokugrumba
I-JHPRO Earth Auger sisixhobo esigqibeleleyo sokukruqula ngokukhawuleza nangaphandle komhlaba ukuseta okuthandwayo: Izithuba zokubiya, Imithi, iipali, izihlahla njl.njl. Isebenzisa i-52cc okanye i-63cc ye-Injini yePetroli eneStroke enamandla kwaye ine-1.3 ilitha itanki yamafutha ikuvumela ukuba ugrimbe ixesha elide phakathi kokugcwaliswa kwakhona
JHPRO Indoda-eNye engu-63CC yePetroli ye-Auger ikunika amandla amaninzi okumba ngokufanelekileyo kunye nokufaka imingxunya yemigangatho, iiposti zocingo, ukutyala imithi nokunye. Ubungakanani obahlukeneyo beebhegi zokufeza ziyahlangabezana neemfuno zakho zokumba umngxuma. Esi sithuba sombane wamandla ombane we-digger sibonisa i-injini enamandla ye-2-stroke 63cc ye-petroli eyenza ukubhola kwemingxunya emininzi ngokulandelelana ngokukhawuleza.
Injini ye-petroli engama-52CC enamandla-2 yenza ukubola kwemingxunya emininzi ngokulandelelana ngokukhawuleza; Iziphatho zebhabhathane ezibanzi ezinokuhanjiswa ngokulula kunye nokugcinwa kwezixhobo.
Itanki yamafutha eyakhelweyo eguqukayo ikuvumela ukuba ukhangele ngokulula xa ufuna ukuzalisa kwakhona. Injineli yenkqubo yokubuyisela umva ngesandla evumela ukuqala ngokukhawuleza kokutsala.
Ukuphatha kunye neTrottle
Ukubamba ngokulula ukubamba umnwe kunye nokutshintsha utshintsho kumqheba wokuphatha ukuze kuphuculwe amandla omsebenzisi kunye nolawulo lwesantya ezandleni zakho.
I-JH-IE48-F yokuqhuba komhlaba wepetroli Ukucaciswa Izixhobo
Uhlobo lwenjini: IE48F, umoya opholileyo, 2-strokeFuel: umxube weoyile (ipetroli: ioyile yenjini yestoke: 25: 1) Ukufuduswa: 63ccMax. Amandla nesantya: 2.5kw / 9000r / minUmthamo wetanki yezibaso: 1200mlInkqubo yokuqala: Qalisa kwakhona ukuqalaUhlobo ucinezelo: CDI
Ubungakanani bokupakisha: 46 * 35 * 29CM
Ibhotile yokukhuthaza: 1pcpriming funnel: 1pcTool bag (4,5,6 socket head wrench, screwdriver sleeve, spark plug socket, srewdriver, 8-10 non-adjustable adjustment, strainer)
I-auger yomhlaba ilungele zonke iintlobo zejoloji:
Isetyenziswa ngokubanzi egadini, ezolimo, ukuloba, ukuhlola umhlaba kunye nolwakhiwo njl.
2.Equipped kunye ezahlukeneyo zokubalula le drill bit, ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo abasebenzisi.
3.Sebenzisa ukubhola ngokufanelekileyo amaxesha angama-20 kunokwenza izinto, ukuqonda ukusebenza ngokuzenzekelayo, ukwenza umsebenzi wakho ube lula ngakumbi, usebenza kakuhle.
Amandla 4.Strong, inkangeleko entle, ukusebenza bekhululekile.
Uhlobo lwe-5.Portable, ubunzima obulula, kulula ukuyiphatha ukwenza imisebenzi yasendle.
Ingxolo 6.Low, kulula ukuqala.
Egqithileyo Uyilo lweJiahao JH168 Ukudilizwa kombane kwiJack Hammer Breaker Breaker
Okulandelayo: JHPRO JH-130A EPA iprintiweyo entsha ephathekayo ipetroli esemgangathweni ekumgangatho ophezulu kwiRock Core Drilling Rig ethengiswayo
Isixhobo seGesi somhlaba seGesi
Ipetroli Earth Auger
Hole ukubhola Digger Machine
Ukutyala i-Auger yomhlaba
JH-IP70A 4 stroke umatshini wokumba kwezolimo ...
JHPRO JH-IP65 4 stroke kwezolimo ukumba mac ...
JH-IE44F-5-1 umatshini wokumba umatshini wezolimo ...
JHPRO JH-IE44F-5 umatshini wokumba wezolimo t ...